Esinye nesinye isakhamuzi kufanele uqonde ukuthi i-evamile eziphilayo ophucukile kuyadingeka ukuba bagcine imithetho ethile yokuziphatha futhi banesibophezelo sezenzo zabo. Uma umuntu enze ubugebengu, ekuwo kuyokwambulwa futhi bajeziswa. Lokhu buyinto ngenakugwemeka esenza ukuba bathi wonke umuntu kuleli zwe ivikelwe isimo, noma ngaphezulu ngokunembile, izidumbu esiphezulu, ezifana amaphoyisa. Ukuze necala ongabangela ubugebengu, udinga ekuqaleni ukudala base ubufakazi, okuyinto, akungabazeki, izoqinisekisa yokuthi wecala lakhe noma ubumsulwa.
Omunye ubugebengu kuba khona umonakalo omkhulu ngokwedlulele ku Criminal Code, owawenziwa kwelinye icala. Ingabe isenzo lobugebengu ukuthi isetshenziswa umonakalo ophathwe kabuhlungu impahla eside. Uyakufanelekela Art isenzo. 167 we Criminal Code.
Code Criminal, Article 167
Ukuze uzwisise ukuthi yini sengozini, cabanga ukuthi lesi sihloko sasho we Criminal Code on ndaba yobugebengu. Kuyini umonakalo abalulekile Criminal Code?
Isihloko ubugebengu ibizwa ngokuthi impahla enye inhlangano (ummangalelwa), umonakalo ukuthi empeleni kwenziwe. Okungukuthi, umonakalo ebalulekile kungenziwa nje kuphela ngokuthi ekubhujisweni, kodwa futhi kulimaze impahla yelinye isakhamuzi.
Isihloko ubugebengu woba inani lezimpahla, okungukuthi intengo, kungenzeka ukunquma indlela inhloso. Ngokuqondene izimo ubugebengu obenziwe ngaphansi kwazo, kodwa futhi ebalulekile. Kuleli zwe lanamuhla thina ngokwethukela ukuzwa izenzo zobuphekula phansi, le migomo nemibandela enqunywe nezinye izihloko ezifanele Criminal Code, okuyinto ukuhlinzekela isijeziso ezahlukene kakhulu.
Ukuze abe nomehluko ocacile phakathi kwezimfundiso nokulinyazwa kwempahla kanye umonakalo, cabanga ukuthi Criminal Code ichaza njengoba Ukucekelwa phansi kwempahla umonakalo.
Ukucekelwa phansi kwempahla wabhekisela izenzo lobugebengu isakhamuzi, ngenxa okuyinto impahla womunye umuntu ufakwe lusizo, okungukuthi, ayikwazi ukulungiswa futhi ayikwazi ukusetshenziselwa injongo yayo yasekuqaleni. Umonakalo ngaphansi kwezimo ezinjalo isicelo "esikhulu".
Lesi sihloko sinikeza uyasijezisa abantu zeminyaka 16 noma 14. Futhi akukho mahluko, okwenza umuntu ubugebengu. Lesi sihloko futhi akacabangi isisusa ubugebengu, ngaphandle uma kungesinye isinyathelo lobugebengu. Ngo ezifana icala kungenziwa lubonakala. Ngomoni, ukuze afihle ukweba, wokhelwa endlini. Wabe uzobe icala lokweba nokucekela phansi impahla ngesikhathi esifanayo.
Ukulimala noma nokulinyazwa kwempahla yomunye
Uma isakhamuzi ngenxa izenzo eziphambene nomthetho uzibophezele umonakalo noma ukulimala kwempahla, neyayingaphansi nesinye isakhamuzi, kuyoba sifanelekele ngaphansi Article 167 we Criminal Code.
Uyini ukulinyazwa kwempahla? Umonakalo ngokuthi izenzo unecala, okuyinto kuye kwaholela ekulahlekelweni olungaphelele isihloko idatha ukusebenza ngaphandle kulona. Ngenxa yalokho, impahla ilimele okudinga ukulungiswa, khona-ke kungenzeka ukuthi abuyise aphoyintimenti kokuqala.
Okungukuthi, ngisho noma ukukhanda kungasizi e nokulinyazwa kwempahla, esimweni umonakalo ngemva kwento ukulungisa ingasetshenziswa ngumnikazi. Kodwa bazokwenza umzamo ngokomzimba ngokushesha nezindlela zokutshala imali, futhi ngenxa yalokho, udinga isikhathi kuyadingeka ukuze siphinde sithole into.
Hlobo luni isijeziso?
Art. 167 we Criminal Code inezingxenye ezimbili. Ngokusho Ingxenye 1, bese kuthi umusho kungaphansi umuntu oneminyaka engu-16 isinyathelo, okwaphumela impahla yomunye okulimele.
Ngokwengxenye 2 kwalesi sihloko kungenzeka ibe ngaphansi kwegunya isijeziso abantu eziye zaphetha abaneminyaka engu-14.
Uma onecala kufanele kuthathwe ngaphansi Article 167 Ingxenye 1, angase abhadle izinhlawulo ezilandelayo:
a kahle kuze kube ama-ruble ayizigidi 40 .;
inhlawulo in inani inkokhelo noma ezinye imali, okuyinto uthola isephulamthetho, ngenani izinyanga ezintathu engenayo;
ukusebenza zokulungisa emahoreni angu-360;
kwezimilo zabasebenzi izinyanga 12;
ayimpoqo zabasebenzi isikhathi esingaba iminyaka emibili;
ukubopha izinyanga kuze kufinyelele 3;
ejele izinyanga kuze kufinyelele 24.
. Uma alahlwe yicala ngaphansi Article 167 okuyingxenye 2, kuyoba sengozini elandelayo umusho:
saziso umsebenzi izigwegwe iminyaka angu-5;
ejele kuze iminyaka 5.
Comment on isihloko
Commentary iSigaba 167 uthi ingxenye 2 sisetshenziswa esimweni lapho isenzo isephulamthetho noma abenzi bokubi uzibophezele ngesizathu hooliganism. Ngaphezu kwalokho, ukucekelwa phansi noma ukulimaza impahla neyaziwayo isenzo ngenhloso. Uma kuleli cala umuntu olimele, ke uyobhekwa njengohlakaniphile infliction ongahlosile ukulimaza abalulekile, umonakalo empilweni.
izinhlangothi ezimbili ubugebengu
Zimbili izici zalesi ubugebengu - kuba inhloso kanye subjective. uhlangothi Inhloso - lena lapho izenzo ngamabomu ayeqondiswe yokuthi impahla ilahlekelwe ukubaluleka kwalo kutemnotfo ezibonakalayo kwenzekani ngempela.
Ekhuluma ohlangothini subjective, kuyafaneleka ukuthi lokhu kungase kungabi isenzo okunenjongo, ukunganakwa umuntu impahla yabanye abantu, okwaholela ekulahlekelweni okuphelele noma okuyingxenye izinto ezibonakalayo, ukubaluleka kwezomnotho kanye umthengi.
Ukuze ukuba bawuqonde ngokucace kakhudlwana ukuthi lokhu kungenzeka, unikeze isibonelo esilula. Umuntu isinqumo ngamabomu ukuba benze wokhelwa kwempahla siqu, kodwa futhi impahla yabanye abantu labhujiswa umlilo. Kulokhu, ngokusebenzisa isihloko 167 we Criminal Code.
Uma izenzo isephulamthetho kukhona uhlamvu Hooligan, kusho bephula umthetho, okuyinto Sasingekho isizathu noma izaba yayingabalulekile. Hooliganism kulokhu isenzo okuhloswe ngaso umonakalo ngenhloso impahla komunye umuntu. Ngenhloso yokwenza umqalisi nesifiso sokunikeza ukukhathazeka kwabanye, ngokuvamile kwenziwa lapho intsha abafisa bagomela ngokwaso ngale ndlela. umonakalo Obalulekile kumuntu qobo ngaphansi Art. 167 we Criminal Code ngeke bajeziswe, naphezu kweqiniso lokuthi isephulamthetho uyaphoqeleka ukuba asenze.
Uma umuntu kungazange kufinyelele engu ezingaba nengalo yomthetho ke ngaye ke kuzodlondlobalisa nabazali bakho noma omunye umuntu Umele izindaba lowo owenze lokho. Kungaba umnakekeli. Article 167 osebenza ezimweni lapho kwakukhona umonakalo obonakalayo Criminal Code.
Ukuhlola ukubaluleka umonakalo
Ukuze Kulicala wayefaneleka ngaphansi sihloko 167 we Criminal Code, kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi inani umonakalo uyakufanelekela ke njengoba abalulekile. izenzo zomthetho unganikezi ocacile kule ndaba.
umonakalo abalulekile Criminal Code - singakanani? Omunye kuphela waphawula ukuthi inani lemali elincane umonakalo okungatholakala wafaneleka njengommemezeli "esikhulu" ungaba ubukhulu ruble 2500. Noma kunjalo, ingaba ziyahlukahluka kuye ngokuthi ezingeni engenayo isisulu.
Kukhona akukho kuhlukaniswa ngokuphathelene umonakalo kumabhizinisi kamasipala noma kwezohwebo. Engalungile yiyona egomela ukuthi "umonakalo yayingakuthinti abalulekile ephathini abalimalanga." Umthetho uthi ukubaluleka umonakalo kufanele azimisele kuphela ngabanye. umonakalo Obalulekile kumuntu qobo ngaphansi Art. 167 we-Criminal Code of the Russian Federation kunqunywa inani lemali elincane ayizinkulungwane 2.5. Ruble. Lona inani eliphansi ukuthi akuxhomekile ezingeni engenayo isisulu.
Yimuphi umonakalo obangelwa kubhekwa abalulekile uma ibhizinisi noma inhlangano? Uma ukulimala inhlangano noma ibhizinisi ukusayina kokuhlaziywa ebaluleke kakhulu ukuba sizihlole zonke izimo icala. Ukuze Ezimweni ezinjalo, kuzothathwa ngokuthi ubukhulu umonakalo ebalulekile izici izindleko zizoba ku uhla kusuka 2500 kuya ruble 250 000. Esimweni ngasinye, le isici kumele ahlolwe ngamunye.